प्रतिनिधिसभा सदस्य कँडेल भारतको क्याम्पसको अध्यक्ष ! - Deshko News Deshko News प्रतिनिधिसभा सदस्य कँडेल भारतको क्याम्पसको अध्यक्ष ! - Deshko News
प्रतिनिधिसभा सदस्य कँडेल भारतको क्याम्पसको अध्यक्ष !
नवलपरासी, असोज ४
नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पुर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल भारतको एक क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष (प्रबन्धक) बनेका छन् ।
ठुठीबारीग्राम पञ्चायतका प्रधान राजेश सिंहलाई निर्वाचनमा पछि पार्दै कँडेल सो कलेजको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष (प्रबन्धक) हुनुभएको छ ।
जम्मा १० मत रहेको यस कलेजको व्यवस्थापन समितिमा कँडेलले छ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार सिंहले चार मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
कँडेल पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । राधाकुमारी इन्टर कलेज नामको सो क्याम्पस पश्चिम नवलपरासीको सीमापारि भारतको महाराजगञ्ज जिल्लाअन्तर्गत ठुठीबारीमा पर्छ ।
यसअघि इन्टर कलेजका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सांसद कँडेलकै हजुरआमा स्व. राधाकुमारी कँडेल र बुबा स्व पृथ्वीराज कँडेल रहनुभएको थियो । पछिल्लो पटक करीब १० वर्ष रिक्त रहेको अध्यक्षमा सांसद कँडेल निर्वाचित हुनुभएको हो ।
महाराजगञ्ज जिल्लाको मुख्य बजार महाराजगञ्जमा बुधबार भएको निर्वाचनबाट कँडेल सो कलेजको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुभएको हो ।
सन् १९५२ सालमा विद्यालय स्थापना भएको सो कलेज नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा निकै प्रख्यात मानिन्छ । नवनिर्वाचित प्रबन्धक कँडेलले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस